Umthetho wokubhanga | Law & More | I-Eindhoven kunye neAmsterdam
Umthetho wokuhlawula amatyala eNetherlands
Ukuxhalaba okuphuhlileyo kwemali kunye nezinye iimeko iinkampani zingasakwaziyo ukuhlawula abo zibabolekayo, kunokubangela ukuba inkampani ibhenke. Ukubhanga kungabubusuku obukhulu kuye nabani na obandakanyekayo. Xa inkampani yakho ineengxaki zemali, kubaluleke kakhulu ukuqhagamshelana negqwetha lokuhlawula amatyala. Nokuba kukuchaphazela ukuntywila kwemali ngenxa yokubhanga okanye ukuzikhusela kwisibhengezo sokungabinamali, igqwetha lethu elinamatyala lingakucebisa ngeyona ndlela kunye nesicwangciso esiliqili. Law & More incedisa abalawuli, abaninizabelo, abasebenzi kunye nababolekisi bamaqela abagqityelwe ukuhlawula amatyala. Iqela lethu lizama ukuthatha amanyathelo ukwenzela ukunciphisa umda kwiziphumo zokungabinamali.
NGABA UNGATHANDA UKUFUMANA INKXASO YOMTHETHO?
NICELA UQHAGAMSHELWANO LAW & MORE
Ukuxhalaba okuphuhlileyo kwemali kunye nezinye iimeko iinkampani zingasakwaziyo ukuhlawula abo zibabolekayo, kunokubangela ukuba inkampani ibhenke. Ukubhanga kungabubusuku obukhulu kuye nabani na obandakanyekayo. Xa inkampani yakho ineengxaki zemali, kubaluleke kakhulu ukuqhagamshelana negqwetha lokuhlawula amatyala. Nokuba kukuchaphazela ukuntywila kwemali ngenxa yokubhanga okanye ukuzikhusela kwisibhengezo sokungabinamali, igqwetha lethu elinamatyala lingakucebisa ngeyona ndlela kunye nesicwangciso esiliqili.
Law & More incedisa abalawuli, abaninizabelo, abasebenzi kunye nababolekisi bamaqela abagqityelwe ukuhlawula amatyala. Iqela lethu lizama ukuthatha amanyathelo ukwenzela ukunciphisa umda kwiziphumo zokungabinamali. Singacebisa ngokufikelela kwindawo yokuhlala nababolekisi, sikwazi ukuphinda siqalise okanye sincede kwiinkqubo zomthetho. Law & More unikezela ngezi nkonzo zilandelayo ngokubhengezwa njengongenamali:
• ukubonelela ngeengcebiso ngokunxulumene nokubhengezwa okanye ukungaphumeleli;
• ukwenza amalungiselelo nababolekisi;
• ukwenza ukuqala kwakhona;
• ukucebisa ngoxanduva lobuqu lolawulo, lwabanini zabelo okanye ngamanye amaqela anomdla;
Ukuqhuba iinkqubo zomthetho;
Ukugcwaliswa kokuchithwa kwamatyala abanamatyala.
Ukuba uyamkweleta, sinokukuncedisa ekuphumezeni ilungelo lokumiswa, ukubekwa ityala okanye ukucima ilungelo onalo. Sinokukunceda ekunyanzeliseni amalungelo akho okhuseleko, njengelungelo lesibambiso kunye nobambiso, ilungelo lokugcina itayitile, iziqinisekiso zebhanki, idiphozithi yokhuseleko okanye iintshukumo ngenxa yokudityaniswa kunye nobutyala.
Ukuba unetyala, singakunceda ekuphenduleni imibuzo ephathelele kula malungelo okhuseleko achazwe apha ngasentla kunye nemingcipheko ehambelana nayo. Sinokucebisa nangokobungakanani na umntu onikwe ilungelo lokusebenzisa amalungelo athile kwaye akuncede kwimeko yokuphathwa kakubi kwala malungelo.
Ngokwe-Bankruptcy Act, umntu onetyala olindele ukuba angakwazi ukuhlawula amatyala akhe angafaka isicelo sokuhlawulwa. Oku kuthetha ukuba umntu onamatyala uvunyiwe ukuba alibazise intlawulo. Oku kulibaziseka kunokunikwa kuphela amaziko asemthethweni kunye nabantu bendalo abasebenza ngokuzimeleyo okanye ishishini. Kananjalo, inokufakwa isicelo kuphela kumtyali okanye kwinkampani ngokwayo. Injongo yoku kulibaziseka kukuphepha ukubhengezwa njengongenamali kunye nokuvumela inkampani ukuba iqhubeke ibekho. Ukufuduswa kunika lowo unetyala ixesha kunye nethuba lokufumana ishishini lakhe. Xa uqhelisela, olu khetho luhlala lukhokelela kumalungiselelo entlawulo kunye nababolekisi. Ukufuduswa kunganikeza isisombululo kwimeko yokuphelisa ukubhengezwa. Nangona kunjalo, abanamatyala abasoloko bephumelela ekufumaneni ishishini labo ngolungelelwano. Ukulibaziseka kwentlawulo kuhlala kuthathwa njengezinto eziza kuqala kubhengezo.
Ngokungqinelana nomThetho wokuNgabinamali, umntu onetyala, okuloo meko athe akaphumelela ukuyibhatala, uya kubhengezwa njengongenamali ngenxa yokuba ebhunga. Injongo yokungabinamali kukwahlulahlula iimpahla zabatyalalekisi phakathi kwababolekisi. Umtyali unokuba ngumntu wabucala, njengomntu wendalo, ishishini lendoda enye okanye intsebenziswano ngokubanzi, kodwa ikwanomthetho, njenge-BV okanye i-NV umntu onamatyala angabhengezwa njengongenamali .
Ukongeza, ubuncinci ityala elinye kufuneka lingabhatalwa, ngelixa bekufanele. Kwimeko enjalo, kukho ityala elityholwayo. Ukubhanga kungafayilwa kubo bobabini umenzi-sicelo ekubhengezeni nasekucelweni kombolekisi omnye okanye nangaphezulu. Ukuba kukho izizathu ezinxulumene nomdla kawonkewonke, iOfisi yomtshutshisi woLuntu inakho nokufaka ifayile yokubhanga.
Emva kwesibhengezo sokungabinamali, umntu othembekileyo ulahlekelwe yilahleko kunye nolawulo lweempahla zakhe zebhanki. Iqela elitshonile alisayi kuphinda lisebenzise naliphi na ifuthe kwezi mpahla. Itrasti iyonyulwa; Eli liTrasti lezomthetho eliya kuhlawuliswa ulawulo kunye nokupheliswa kwepropathi yokuhlawula amatyala. Itrasti ke iyakuthatha isigqibo ngento eya kwenzeka ngee-asethi zokubhanga. Kuyenzeka ukuba itrasti ifikelele kwilungiselelo kunye nababolekisi. Kule meko, kungavunyelwana ukuba ubuncinci inxenye yamatyala abo aya kuhlawulelwa. Ukuba isivumelwano esinjalo asinakufikelelwa, itrasti iyakuqhuba ukugcwalisa ukubhengezwa. Ipropathi iyakuthengiswa kwaye iirhafu ziya kwabiwa kubabolekisi. Emva kokuhlawulwa, iziko elisemthethweni elibhengezwe njengelibhanki liza kuchithwa.
Ngaba kufuneka ujongane nomthetho wokungakwazi ukuhlawula amatyala kwaye ungathanda ukufumana inkxaso yomthetho? Nceda unxibelelane Law & More.